ဖာမင်နိုနဲ့ ပက်သက်ပြီး ပရီးမီးယားလိဂ် ဂန္တဝင်ကြီးတွေရဲ့ ကျော်ကြားတဲ့ ချီးကျူးစကားများ - Myan News
ဖာမင်နိုနဲ့ ပက်သက်ပြီး ပရီးမီးယားလိဂ် ဂန္တဝင်ကြီးတွေရဲ့ ကျော်ကြားတဲ့ ချီးကျူးစကားများ
လီဗာပူးအသင်းဟာ ခံစစ်ပိုင်းမှာ နေရာရလာပေမယ့်လို့ တည်ငြိမ်တဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်အတွက် အရေးပါလာတာက တိုက်စစ်ပိုင်း ထူးချွန်ထက်မြက်ခြင်းဆိုတဲ့ အရည်အချင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
လီဗာပူးတိုက်စစ်သမားတွေဖြစ်တ့ မာနေးနဲ့ ဆာလက်ဟာ ကမ္ဘာအကောင်းဆုံး တိုက်စစ်သမားစာရင်းတွေထဲ ပါဝင်လာသလို ဘလွန်းဒီအော့၊ ယူအီးအက်ဖ်အေ၊ ဖီဖာ အစရှိတဲ့ အကောင်းဆုံး ကစားသမားဆုတွေအတွက် ရေပန်းစားမှုတွေထဲ ပါဝင်လာပေမယ့်လို့ တိုက်စစ်သမား ဖာမင်နိုကတော့ ချန်လှန်ခံထားရဆဲပါ။
ပုံမှန် အထောင်တိုက်စစ်သမားတွေနဲ ကွဲထွက်နေပြီး အသင်းတိုက်စစ်ကို ဦးဆောင်သူ၊ ခံစစ်ကို ကူညီသူနဲ့ ယာဂင်ကလော့ပ်ရဲ့ ဖိအားပေးကစားဟန်မှာ အသက်သွေးကြောလို့ ဆိုကြတဲ့ ဖာမင်နိုဟာ တစ်ဦးချင်း ထူးချွန်မှုအတွက် ရေပန်းမစားပေးမယ့် ပရီးမီးယားလိဂ် ဂန္တဝင်ကြီးတွေရဲ့ ကျော်ကြားတဲ့ ချီးကျူးစကားတွေကတော့ အောက်ပါအတိုင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
မော်ရင်ညို ” အူဘာမီယန်က လီဗာပူးမှာ ဘယ်တောင်ပံက ကစားမယ်ဆိုရင် အာဆင်နယ်မှာထက် ဂိုးတွေအများကြီး ပိုသွင်းပါလိမ့်မယ်။ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ လီဗာပူးမှာက တွဲကစားပေးမယ့် အရည်အချင်းကြယ်ပွင့်တဲ့ ဖာမင်နိုလို တိုက်စစ်သမား ရှိနေပါတယ်။ ”
အာဆင်ဝင်းဂါး ” ဖာမင်နိုဟာ အနစ်နာခံတဲ့ ကစားသမားတစ်ဦးပါ။ သူက အသင်းအတွက် အစွမ်းကုန် ကြိုးစားပေးပြီး အသင်းဖော်တွေကိုပဲ တောက်ပသွားအောင် ကူညီပေးတတ်တဲ့သူပါ။ ”
သီယာရီ အွန်နရီ ” ဖာမင်နိုက ပရီးမီးယားလိဂ်မှာ ပြည့်စုံမှုအရှိဆုံး တိုက်စစ်သမားပါ။ ကျနော်က အကောင်းဆုံး အဆုံးသတ်သူ၊ လုပ်အားနှုန်း ပိုင်ဆိုင်သူအကြောင်း စကားပြောနေတာ မဟုတ်ပါဘူး။ အဲ့သည်အရည်အချင်းတွေ အားလုံးပိုင်ဆိုင်ထားသူအကြောင်း ပြောနေတာပါ. သူက လိဂ်ရဲ့ အပြည့်စုံဆုံး တိုက်စစ်သမားပါ။ ”
လီဗာပူးအသငျးဟာ ခံစဈပိုငျးမှာ နရောရလာပမေယျ့လို့ တညျငွိမျတဲ့ စှမျးဆောငျရညျအတှကျ အရေးပါလာတာက တိုကျစဈပိုငျး ထူးခြှနျထကျမွကျခွငျးဆိုတဲ့ အရညျအခငျြးပဲ ဖွဈပါတယျ။
လီဗာပူးတိုကျစဈသမားတှဖွေဈတ့ မာနေးနဲ့ ဆာလကျဟာ ကမ်ဘာအကောငျးဆုံး တိုကျစဈသမားစာရငျးတှထေဲ ပါဝငျလာသလို ဘလှနျးဒီအော့၊ ယူအီးအကျဖျအေ၊ ဖီဖာ အစရှိတဲ့ အကောငျးဆုံး ကစားသမားဆုတှအေတှကျ ရပေနျးစားမှုတှထေဲ ပါဝငျလာပမေယျ့လို့ တိုကျစဈသမား ဖာမငျနိုကတော့ ခနျြလှနျခံထားရဆဲပါ။
ပုံမှနျ အထောငျတိုကျစဈသမားတှနေဲ ကှဲထှကျနပွေီး အသငျးတိုကျစဈကို ဦးဆောငျသူ၊ ခံစဈကို ကူညီသူနဲ့ ယာဂငျကလော့ပျရဲ့ ဖိအားပေးကစားဟနျမှာ အသကျသှေးကွောလို့ ဆိုကွတဲ့ ဖာမငျနိုဟာ တဈဦးခငျြး ထူးခြှနျမှုအတှကျ ရပေနျးမစားပေးမယျ့ ပရီးမီးယားလိဂျ ဂန်တဝငျကွီးတှရေဲ့ ကြျောကွားတဲ့ ခြီးကြူးစကားတှကေတော့ အောကျပါအတိုငျးပဲ ဖွဈပါတယျ။
မျောရငျညို ” အူဘာမီယနျက လီဗာပူးမှာ ဘယျတောငျပံက ကစားမယျဆိုရငျ အာဆငျနယျမှာထကျ ဂိုးတှအေမြားကွီး ပိုသှငျးပါလိမျ့မယျ။ ဘာလို့လညျးဆိုတော့ လီဗာပူးမှာက တှဲကစားပေးမယျ့ အရညျအခငျြးကွယျပှငျ့တဲ့ ဖာမငျနိုလို တိုကျစဈသမား ရှိနပေါတယျ။ ”
အာဆငျဝငျးဂါး ” ဖာမငျနိုဟာ အနဈနာခံတဲ့ ကစားသမားတဈဦးပါ။ သူက အသငျးအတှကျ အစှမျးကုနျ ကွိုးစားပေးပွီး အသငျးဖျောတှကေိုပဲ တောကျပသှားအောငျ ကူညီပေးတတျတဲ့သူပါ။ ”
သီယာရီ အှနျနရီ ” ဖာမငျနိုက ပရီးမီးယားလိဂျမှာ ပွညျ့စုံမှုအရှိဆုံး တိုကျစဈသမားပါ။ ကနြျောက အကောငျးဆုံး အဆုံးသတျသူ၊ လုပျအားနှုနျး ပိုငျဆိုငျသူအကွောငျး စကားပွောနတော မဟုတျပါဘူး။ အဲ့သညျအရညျအခငျြးတှေ အားလုံးပိုငျဆိုငျထားသူအကွောငျး ပွောနတောပါ. သူက လိဂျရဲ့ အပွညျ့စုံဆုံး တိုကျစဈသမားပါ။ “